Nitrangana halatra omby tao Ambarialoha, Mangatany, distrikan’i Fenoarivobe, ny takarivan’ny
zoma 28 jona, tokony ho tamin’ny 6 ora. Nampandre ny zandarimariam-pirenena tany an-toerana ny ben’ny tanàna lefitra ao amin’io kaominina ambanivohitra io. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandarimariam-pirenena teo Ankadilalana. Dahalo 11 ireo tonga nanafika ny fianakaviana iray teo Ambarialoha ka lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny omby 15. Tsy afa-nanohitra anefa ireo mponina teo an-toerana noho ny hery tsy mitovy. Nitondra fitaovam-piadiana tahaka ny basy telo sy zava-maranitra maro ireo Malaso. Nampandre ny manampahefana teo an-toerana izay nampita ny vaovao
tany amin’ny miaramilan’ny zandary no hany nataon’ireo mpiray monina. Nanara-dia avy hatrany ny fokonolona sy ny zandary dimy lahy. Ireto farany ihany koa nampandre ireo mpitandro filaminana
tamin’ny manodidina, indrindra hifehy ny kizo falehan’ny dahalo mandroaka omby halatra. Avotra noho izany ny omby efatra fa mbola mitohy hatrany kosa ny fanarahan-dia ikarohana ireo 11